Websaydhka 'Strange Planet' ee websaydhku wuxuu u iman doonaa Apple TV + oo ah taxane xarago leh | Waxaan ka socdaa mac
Webka webka yaabka leh ee imanaya Apple TV + oo ah taxane animated ah
Waxaan u maleynayaa inay tani ka mid tahay waxyaabaha uu ka maqnaa Apple TV +. Keydinta Central Park. Taxane majaajillo ah oo majaajillo ah oo ku jira qorshe maadda ah. Waxaan horey u haysanay sawiro sida Charlie Brown laakiin kuma xirna qaabka Meelaha yaabka leh. Webcomic ku saleysan sheekooyinka shisheeyaha buluugga ah ee dhowaan saaxiib la noqon doona fikradahooda xariifka ah si ay u xalliyaan howlaha maalinlaha ah. Dabcan, waa inaan ula qabsanaa luuqaddiisa gaarka ah.
Apple TV + wuxuu bilaabay la-qabsashada tooska ah ee taxanaha "Qariibka Qariibka ah" iyada oo Dan Harmon iyo Nathan Pyle ay u adeegayaan soosaarayaal fulineed. Webcomic-ka "Qariibka Weyn" waxaa ku jira ajaanib buluug ah oo kalgacal iyo saaxiibtinimo leh oo hawl maalmeedkooda qabta, laakiin ku sifeeya luuqad qalaad. Nathan Pyle, abuuraha websaydhka, iyo Dan Harmon, oo wada-abuure u ah "Rick iyo Morty," waxay u adeegaan sidii soosaarayaasha fulinta ee bandhigga. Sida laga soo xigtay Deadline, taxanaha waxaa soo saaray Istuudiyaha Apple iyo istuudiyaha animation ShadowMachine, oo mas'uul ka ahaa "Bojack Horseman." Faahfaahin dheeri ah oo taxanaha ah lama wadaagin. Marka waxaan noqon doonnaa feejignaan si aan u aragno sida wax u dhacaan.
Nathan Pyle wuxuu malaayiin taageerayaal ah ku uruuriyay barta internetka ee 'webcomic', oo soo shaac baxday sanadkii 2019, wuxuuna daabacay buugaag dhowr ah. Maadooyinka iyo buugaagta "Meelaha Qariibka ah" aad bay u guuleystaan ​​gaar ahaan sababta oo ah ajaanibta buluuga ah ee nolosha arka. Weedhihiisa iyo tilmaamihiisu waa kuwo gaar ah.
Isla marka aan ogaanno taariikhaha sii deynta ama wixii kale ee war ah ee ku saabsan taxanahan cusub ee TV-ga Apple + waan kula soo socodsiin doonnaa. Hadda si aad u hesho dhadhan mawduucan, waa inaad ogaataa in xilli labo ka mid ah Central Park ayaa ku dhow inay soo baxaan. Sida had iyo jeer, ka tayada iyo tirada laakiin in ay jiraan wax badan oo ka dambeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Webka webka yaabka leh ee imanaya Apple TV + oo ah taxane animated ah
Opera waxay ku cusbooneysiisaa biraawsarkeeda Mac-da wicitaanno fiidiyoow ah iyo warar dheeri ah